Hevitra ambongadiny saka ambongadiny 4,5 mirefy napetraka miaraka amin'ny toro-hevitra manodidina ny fiarovana mpanamboatra sy mpamatsy | Icool
Modely ： IC-45-1; IC-4525T
Size: 4,5 santimetatra, nify 25
Endri-javatra: napetraka hety hety
● Kitapo hety misy haingon-trano misy alika 4,5-inch miaraka amin'ny tendrony boribory izay mety amin'ny fikolokoloana ireo faritra mora tohanan'ny alika toy ny sofina, PAWS, faritra orona ary paw Ny hety amin'ny fikolokoloana dia manana tendrony boribory, ka mahatonga azy ireo ho fampiasa amin'ny tarehy volo.
● Misy - 4.5 mirefy, 25 nify manety ho an'ny alika / saka + hety fikolokoloana mahitsy 4,5 inch. Izy io dia manana tànana mitazona malefaka misy lavaka rantsan-tànana sy fitsaharana rantsan-tànana anatiny mba hahafahanao mahazo aina kokoa amin'ny famitana ny palitao. Ho fanampin'izay, boribory avokoa ny volo-bolo rehetra hiantohana ny fiarovana. Ny landy silipo amin'ny tanany isaky ny angadin'alika dia manakana ny fametahana rantsan-tànana tsy nahy. Misy ihany koa ny mampangina eo anelanelan'ny lelany manapaka mba hahatonga ny fizotran'ny fanapahana mangina kokoa.
● Ity fampiasa ity dia manampy fanaraha-maso bebe kokoa mba hisorohana ny fanapahana volo ny alika tsy ilaina. Raha vao manomboka ianao, dia mora ampiasaina ny volon'alika miisa alika 5-inch. Noho izany ny fikolokoloana sy ny fandavorariana ny halavan'ny alika dia ho tonga ho azy. Ireo mpampiofana matihanina dia ho tia mampiasa azy ireo amin'ny famitana ny fikasihana sy ny fikasihana haingana.
● Ny hety dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony 440C ho an'ny faharetana mitombo. Ny vatan'ny volo dia mandray lamina sokitra mba ho tsara tarehy kokoa. Ny hety dia mampiasa volomaso avo lenta miaraka amin'ny diamondra mavokely, mora ny manitsy ny fihenan'ny hety, miaraka amin'izay, avelao ny hety hitadidy loko kokoa.
4,5inch, nify 25
Hety mahitsy sy manify
Teo aloha: 440C Stailess vy mpanao hety mpanety
Manaraka: Gunting ho an'ny biby fiompy 8PCS napetraka miaraka amin'ny kitapo hoditra
Black Titanium Plating Pet Alika saka fikolokoloana Str ...